Cabdi iley oo ku dhex dhdacay kooxdii ka carartay ee Addis ababa kusugnayd. | ogaden24
Cabdi iley oo ku dhex dhdacay kooxdii ka carartay ee Addis ababa kusugnayd.
Jan 10, 2017 - Aragtiyood
Horjoogaha maamulka Jigjiga oo ay lasoo daristay cabsi laxidhiidha is badalada maamulka Woyanuhu kawado maamulada Hoostaga, ayaa Qaaday Talaabo uu ku Hujuumay kooxdii horay maamulka uga tirsanaan jirtay ee ka cararay magaalada Jigjiga.
Wariyaha Ogaden24 ee magaalada Jigjiga ayaa sheegay in koox katirsan maleeshiyada Liyuuga Qaybtooda sirdoonka oo kaashanaya sarkaal katirsan Police-ka magaalada Addis ababa, ay iskudayeen inay soo Qab qabtaan shakhsiyaadka colaadu kala dhaxayso Cabdi iley, kuwaasi oo uu Aaminsan yahay inay wadaan Qorshe xilka lagaga Qaadayo.
Sargaalka Booliiska ah iyo 5-kamida maleeshiyada sirdoonka Liyuuga ayaa maalinkii sabtida Gacanta kudhigay 3-kamida xubnaha kusugan magaalada Addis ababa, waxaana lagu xidhay saldhiga dhexe ee Federal Police-ka magaalada Addis ababa, halkaasi oo ay kuxidhnaayeen ilaa Fiidnimadii.
Xubnaha kabad baaday iskudayga Af-duubka oo dadaal xoogan u galay samata bixinta saaxiibadooda ayaa ugu dambays ku Guulaystay in 3-da xubnood ee laqabtay ay dib xoriyadooda u helaan, waxaana Talaabadan oo ahayd iskudaygii u dambeeyay ee Cabdi iley uu sameeyo ay walaac xoogan ku abuurtay inta badan shakhsiyaadkii colaadu kala dhaxaysay oo kusugan magaalada Addis ababa Rajana kaqaba in wax uun is badalaan.
Magaalada Jigjiga ayaa maalinimadii sabtadi waxaa lagu dhex Faafiyay war sheegaya in 6-kamida kooxda kusugan Addis ababa Gacanta lagu dhigay, balse warkaasi ayaa been noqday kadib markii xubnaha laqabtay oo 3-ahaa ay kabad baadeen iskudaygii Jigjiga loogu Af duubayay.